हिमेश पन्तले जिते पहिलो कमेडी च्याम्पियन
काठमान्डौ : नेपाल को पहिलो हास्य र एकदमै चर्चित रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनको फाइनल को नतिजा सार्बजानिक भएको छ ! फाइनल मा टप ३ को प्रतिस्पर्धा रहेको थियो ! हिमेस पन्त , खड्क बहादुर पुन मगर र सुमन कोइराला टप ३ मा पुगेका थिए ! खड्क बहादुर पुन मगर र सुमन कोइराला लाइ पछी पार्दै पहिलो कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्त ले जितेका छन् !
देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले गरेको भोटका आधारमा नै हिमेश पहिलो कमेडी च्याम्पिनय चुनिएका हुन् । विजेता भएसँगै हिमेशले २५ लाख र एउटा गाडी उपहार पाएका छन् ।टप ३ मा पर्न सफल तीन प्रतियोगीले कमेडी च्याम्पियनको टिमसँग वर्ल्ड टुरको अवसर पाएका छन् ।विशाल भण्डारीको निर्देशनमा तयार भएको यस रियालिटी शोमा विशाल, केकी अधिकारी र रीमा विश्वकर्मा लगायतको लगानी रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अनुहारमा दाज डन्डीफोर आएर चिन्तित हुनहुन्छ ?अब बसेर घरमै यसरी चट् पार्नुहोस्
मोटोपनले त’नावमा हुनुहुन्छ? यस्ता छन् मोटोपन हटाउने सजिला उपायहरू । जानिराख्नुहोस्
काठमाडौँमा विद्यार्थीमाथि अमानवीयताको हद : कम नम्बर ल्याउने ३४ विद्यार्थीको ब्लेडले हात चि’रियो